लेकाली धरोहर फलामेडाँडा | मझेरी डट कम
bheshraj71 — Sun, 09/02/2018 - 22:21
ʻअबदेखि आउनेछैन धौलापहरोको बाटो, भनेजस्तै भएको होला है ?ʼ पहिलोपटक धौलापहरो उक्लँदा भेटिएका रातमाटाका बाले मलाई सोधेको सम्झन्छु ।
भोटेडाँडाको रोपाइँमा असारको रौनक देखियो । असारे हिलोमा खुट्टा हाल्न नपाए पनि मन चोबल्छु बेस्सरी । मलाई औधि मनपर्छ– मेहनतको बीउ रोप्ने ऋतु, खुसी फलाउन पसिना पोख्ने महिना, मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन ।
कुवापानी र गिद्देश्वर गाउँ देखिए पनि कहाँ हो कहाँ आकासमा उचालिएको छ फलामेडाँडा ! हैन, चढ्न नसकिने हो कि क्या हो फलामेडाँडा !
फलामेडाँडा उक्लन फलामको चिउरा चपाएजस्तो भयो, फलामे किल्ला भत्काउन परेजस्तो भयो, पसिनाले फलाम गलाउन परेजस्तो भयो ।
धैर्यता र उत्साहसँग हातेमालो गर्दै उक्लिछाड्यौँ फलामेडाँडा हामीले । टेकिछाड्यौँ नीलगिरि र अन्नपूर्णाको आँगन । देखिछाड्यौँ लेकाली सभ्यताको बाक्लो बस्ती । सम्बत् २०७५ सालको मध्यअसारमा छोइछाड्यौँ पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको लेकाली धरोहर ।
साँझ छिप्पिँदै जानलागे पनि कालो पहाडमास्तिर राँको बालेर बाटो देखाउन पर्खिरहेथ्यो कोही ।
मेरो जकोस्टा आमाको समर्थनमा
छोडीजाने प्रियसीको यादमा
सिमलको नाङ्गो हाँगा